Iyo ichangobva kuwanikwa Yekushanya Inotarisirwa kuNiger Delta muNigeria
musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose » Nigeria Breaking News » Iyo ichangobva kuwanikwa Yekushanya Inotarisirwa kuNiger Delta muNigeria
African Tourism Bhodhi • Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose • tsika nemagariro • Hurumende Nhau • Investments • nhau • Nigeria Breaking News • ushanyi • Kufamba Wire Nhau • Trending Now
Sekureva kweInternational Maritime Bureau (IMB), paive nekupambwa kwemakungwa 135 nemakumi mashanu kwakanyorwa muna 2020 —uye zana nemakumi matatu akaitika muGulf yeGuinea. Zvakawanda sekutorwa kweMozart, mazhinji ekuba vanhu aitevera chinyorwa chinowedzera kuva nenjodzi.
Kunze kweizvi vatungamiriri venzvimbo yekushanya varikutarisa vatori venhau kuti vaparadzire mumwe mufananidzo unokoka wedunhu iri reNigeria kukwezva kushanya.
Niger Delta ndiyo Delta yeNiger Rwizi yakagara yakanangana neGulf yeGuinea paAtlantic Ocean muNigeria.
Niger Delta inozivikanwa nePiracy, zvikwata zvine zvombo, uye mafuta akarasika, zvichiita kuti kusimudzira kwekushanya kuve chinetso.
Sachigaro, Nigeria Union yeVanyori venhau (NUJ), Bayelsa State Council, VaSamuel Numonengi zvisinei vanonzwa kuendesa kwakashata kweRuzivo senzvimbo yekusimudzira kwekushanya muNiger Delta Dunhu.
Kufamba neKushanya indasitiri yerunyararo. Uyu unogona kunge uri mukana wekuti vanhu vari muNiger Delta muNigeria vavake pairi. Joker mune izvi zvingave zviri kuuya kubva kuJamaica.
Hakuna kupi paPasi pano pirates dzinorova kazhinji kupfuura kuGulf yeGuinea, uko vanopfuura vafambisi vezvikepe zana nemakumi matatu vakatorwa senhapwa gore rapfuura.
Tsvagiridzo yakaitwa neWorld Conservation Union pamwe nemasangano ehurumende yeNigeria zvinoratidza kuti paavhareji gore rega rega pamakore makumi mashanu apfuura mafuta akateurwa muNigeria anga akaenzana nerakadururwa muna 50 Exxon Valdez muAlaska.
Nzvimbo iyi ine njodzi kudarika gungwa reSomalia. EU inoda kuita chimwe chinhu nezvazvo.
Dhipatimendi reUnited States rinoti nezvekuenda kuNigeria: Fungazve nezvekuenda kuNigeria nekuda kwe mhosva, ugandanga, kusagadzikana kwevanhu, kubata, uye mhosva dzegungwa. Exercise yakawedzera chenjera nekuda kwe COVID19. Dzimwe nzvimbo dzawedzera njodzi. Verenga iyo yose Kufamba Kuraira.
Chidzidzo che2018 kuNiger Delta Dunhu uye kusimudzira kwekushanya kunopfupikisa:
Pfungwa huru yechidzidzo ichi yaive yekuongorora kubirwa mugungwa uye zvazvinoreva mukuvandudza kwekushanya muNiger Delta Dunhu reNigeria.
Nekuvhurwa kweiyo Tourism Welcome Center Akataura maonero eruzhinji enharaunda inoenderana nerunyerekupe anokuvadza kusimudzira kwehupfumi pamwe nehupfumi hwenzvimbo iyi yeNigerian, achisimbisa kuti inguva yakwana kuti vanhu vedu vatange kupa yavo yavo nhoroondo nyaya yekugadzirisa zvisizvo zvisirizvo nezve dunhu.
Sachigaro, Nigeria Union yeVanyori venhau (NUJ), Bayelsa State Council, VaSamuel Numonengi vashora kuparadzirwa kweRuzivo kwakashata senzvimbo yekusimudzira kwekushanya muNiger Delta Dunhu.
Numonengi akatsanangura kusavapo kwemapepa akakodzera ehupfumi hwetsika yemaIjaws sedambudziko rakakura mukusimudzira mikana yekushanya.
Akacherekedza kuti mamirioni emabasa nemabhizinesi anoenderana nechikamu chakasimba uye chinobudirira chekushanya. Tourism yave iri simba rekufambisa mukuchengetedza zvakasikwa uye tsika nemagariro, ichivachengetedza kumazera anotevera kuti vafare
Vati Visitor Information Centres (VICs), zvimwe zvinonzi “Tourist Information Centres kana maWelcome Centres, anonyanya kugadzirirwa kupa vafambi ruzivo runobatsira kuvandudza kugara kwavo mune imwe nzvimbo yavakashanyira.
Numonengi akati Ernest Ikoli Visitor Information Center Management Committee inotarisirwa kupa nzvimbo inoshamwaridza uye inogamuchira vashanyi vari kushanyira nyika kekutanga kuve neruzivo rwakakosha nezve zvigadzirwa zvekushanya nemasevhisi, pamwe nekupa zano rekufambisa kana gwara kune vakadaro. vashanyi.
Akatsanangura kuti nhengo dzekomiti manejimendi yeErnest Ikoli Visitor Information Center avo vakasarudzwa zvine hungwaru vanotarisirwa kuita zviitiko zvekushanya nekushambadzira zvigadzirwa zvemuno zvekushambadzira pamwe nemasevhisi kuti agadzirise hupfumi hwenzvimbo nechinangwa chekusimudzira kutandara hupenyu hwevagari nevaenzi.
Sekureva kwaState Council Sachigaro, danho iri chikamu cheBayelsa State Council yeNigeria Union yeVatori venhau kuti vabatsire mukusimudzira kwehupfumi pamwe nehupfumi hwehutongi hwehupfumi pasi paSenator Douye Diri.
Ernest Ikoli Visitor Information Center Management Committee ine sachigaro weTravel Writers Corps yeNigeria Union yeVatori venhau, Bayelsa State Council, Piriye Kiyaramo seMutungamiriri-General, ukuwo Secretary of the State Council yeNUJ, Komuredhi Ogio Ipigansi achizoshanda semunyori.
Dzimwe nhengo dzinosanganisira: Aimbova sachigaro wenyika yemubatanidzwa, Tarinyo Akono, aimbova secretary wenyika, C Stanley Imgbi, Coordinator òf International Institute of journalism (IIJ), Yenagoa Study Center, Roland Elekele na Business Manager weSilverbird FM Oxbow Lake Swali-Yenagoa, Oyins Egrebindo
Vanogadzwa zvakare ndiGeneral Manager Peoples 'FM, Oxbow-Lake, Lawson Heyford, General Manager weRoyal FM, Agudama, Tudor Ayah, Acting General Manager weBayelsa Broadcasting Corporation, Terence Ekiseh, VaTonye Yemoleigha (Radio Bayelsa), VaFiezibe Osain (Ministry of Information), Agidee Theophilus (Africa Independent Television), Mupepeti-Mukuru weNew Waves, Peace Sinclair, aimbova National Ex-office ye NAWOJ, Beatrice Sikpi uye aimbova Zonal Mutevedzeri Wemutungamiriri weNational Association of Women Journalists (NAWOJ), Mai Timi Idoko.
Achipindura, Director-General weErnest Ikoli Visitor Information Center, Komuredhi Piriye Kiyaramo, uyo anoverengera zvakare sasachigaro, Travel Writers Corps yeNUJ, akatenda hutungamiriri hwekanzuru yenyika nekumuwana pamwe nedzimwe nhengo dzakakodzera kushanda, sezvaakaita akavimbisa kuendesa pane rairo yavakapihwa.
Izvo zvichayeukwa kuti nzvimbo yekushanyirwa yevashanyi yekuenda, dzimwe nguva inonzi "Yekugamuchira Center" inopa imwechete-yekumira, nzvimbo chaiyo kubva kune iyo vafambi vanokwanisa kubatana kumabhizinesi emuno nemasevhisi.
Uye zvakare, iyo nzvimbo yevashanyi yeruzivo inotarisirwa kupa nzvimbo yekuburitsa mari kuburikidza nekutengesa kwezvinhu nekutengesa zvemuno pamwe nekubata uye kuongorora akakosha mafambiro evafambi uye manhamba ezvinangwa zvekuronga.
Mwedzi wapfuura Jamaica Gurukota Rezvekushanya uye Co-Sachigaro weGlobal Tourism Resilience uye Crisis Management Center (GTRCMC), Edmund Bartlett, vazivisa kuti nhaurirano dzave kuitika dzekumisirwa kwenzvimbo ye satellite yeGTRCMC muNigeria. Inogona kunge iri yakanaka yakanaka yekutanga danho rekutanga kufamba uye kushanya mune imwe yenzvimbo dzakasimba uye dzakakosha muAfrica.
The Afrivanogona here Tourism Board kutambira danho iri muNigeria uye vakagadzirira kubatsira kana vabvunzwa.